Bayaanka Qarsoonnimada - Xannaanada Carruurta San Diego
DOkumentigani waxa uu ka kooban yahay MACLUUMAAD MUHIIM AH OO KU SAABSAN ILAALINTA XUQUUQDAADA EE SHARCIYADA GAAR AH EE GOBOLKA
Sida caadiga ah, ma daaha ka qaadi doono xog shakhsi ah oo ku saabsan macaamiisheena ama macaamiisheena hore qofna, si waafaqsan waajibaadyada sirta xirfadaheena. Si kastaba ha ahaatee, markaad codsato, waxaanu daaha ka qaadi doonaa macluumaadka adiga kugu saabsan, waxaana laga yaabaa inuu sharcigu nooga baahdo inaan bixino macluumaadka shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan, tusaale ahaan, annagoo ka jawaabayna amar maxkamadeed ama amar kale oo maxkamadeed.
Waxaan raacnaa shuruucda Gobolka ee ku saabsan sirta macluumaadka. Isticmaalka ama siidaynta macluumaadka khuseeya ubadka ama qoyska ubadka waa in lagu xadidaa ujeedooyinka tooska ah ee laxidhiidha maamulka adeegyada daryeelka ilmaha ee la kabayo. Xog ururinta iyo faafinta macluumaadka waa in loo maamulaa si loo xaqiijiyo sirta magacyada iyo ciwaannada shakhsiyaadka oo dhan. Waxaan u hoggaansamaan xeerarka halkaas mar kasta oo aan la wadaagno macluumaadka lagama maarmaanka u ah maamulka adeegyada daryeelka ilmaha la kabka ah Waaxda Waxbarashada, ka qaybqaadashada hay'adaha horumarinta carruurta, waaxda daryeelka degmada, iyo bixiyayaasha Head Start ka qayb qaadanaya, golaha deegaanka qorsheynta daryeelka ilmaha, iyo wax kasta oo kale. wakaalada ka qaybqaadata ee gobolka.
Waxaan isticmaalnaa taxadar si aan u ilaalino amniga xogtayada lagu gudbiyo kombuyuutarka. Waxaan siinaa marin u helka macluumaadkaaga gaarka ah kaliya shaqaalaha u baahan inay ogaadaan macluumaadka si ay kuu siiyaan adeegyada. Waxaan ilaalinaa ilaalinta jirka, elegtarooniga ah iyo nidaamka si aan u ilaalino macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waxa aanu ku jirnay oo aanu sii wadnay in aanu ku xidhno heerarka sirta ah ee xirfadaysan ee xataa aad uga adag kuwa sharcigu u baahan yahay.
Waxaan ballan qaadeynaa helista adeegyada iyo shaqada loo siman yahay iyadoon loo eegayn jinsiyad, jinsi, midab, abtirsiinyo, diin, lab iyo dhedig, asal qaran, naafo, ama nooca galmada. Fadlan na soo wac haddii aad rabto inaad dib u eegto tan ama arrin kale oo faahfaahsan.